Kooxda UN ee kormeerka hubka oo labo eedood dusha uga tuuray madaxweynaha Puntland – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Kooxda Qaramada Midoobey u qaabilsan la socodka arrimaha hubka Somalia iyo Eritrea ayaa ku qoray warbixin Golaha Amaanka ay hordhigeen, in madaxweynaha maamulka Puntland, C/weli Maxmaed Cali Gaas ka gaabiyey la dagaalanka Al-Shabaab iyo inuu xiriir aan qarsooneyn uu la leeyahay shaqsiyaad burcad badeed ah.
Sideeda xubnood ee baarayaasha ah UN-ka ayaa ogaadey sida warbixinta lagu sheegay in Al-Shabaab khatar sii galinayaan nabada deegaanada Puntland, islamarkaasna dhex-gal ku sameynayaan ciidamada Puntland oo niyad jab xoogan ka muuqdo.
Warbixintaan ayaa lagu xusey sida Agaasimaha guud ee Madaxtooyada Puntlan Deeq Suleymaan Yusuf xiriir joogta ula lahaa kooxda baarayaasha QM ‘UN Monitoring Group’ balse u joogsadey si-lama filaan ah.
Kooxdaan ayaa soo bandhigtey sida joogtada ah oo ay isugu dayeen iney la xiriiraan Madaxweynaha Puntland iyo xafiiskiisa iyagoo raadinaya sidii wax la isaga waydiin lahaa dhaqdhaqaaqa ururka Al-Shabaab ee Puntland iyo dibadeeda.
Khabiirada ka tirsan kooxdaan ayaa ku qiimeyey afar xaladood iney sabab u tahay inuu kordho dhaqdhaqaaqa kooxda Al-Shabaab ee Puntland; “Qabo oo sii daa” siyaasada ah oo uu Madaxweyne Gaas ku dhaqmo, niyad jabka ciidamada Puntland,kooxda Al-Shabaab oo laga saarey Koonfurta Somalia iyo aqoonsiga la aqoonsadey hogaamiyaha siyaasada kooxda Al-Shabaab ee Puntland ka dagaalama.
“Sanadkii la soo dhaafey waxaa la hayaa cadeymo sheegaya in kooxda Al-Shabaab si joogta ah u raadineysay sidii ay u dhexgali laheyd ciidamada Puntland.” Akhri warbixinta ” Puntland kooxda Al-Shabaab waxay kordhiyeen ilaalada ay ku hayaan xarumaha Qaramada Midoobey islamarkaana raadinayaan goobo ay kaga dhuuntaan ciidamada amniga.”
Kooxda QM u qaabilsan la socoshada arrimaha jabinta cunaqabateynta hubka iyo la dagaalanka argagixisada ayaa warbixintooda ku sheegey in qofkii diley taliyihii qaybta booliska gobolka Barri Cabdiraxman Cali Cabaas ” AHN” August 4, 2014 magaciisa la oran jirey Maxamad Abuukar Zubeyr uu qabiil ahaan kasoo jeedey midka Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Cali Gaas.
Kooxdaan ayaa sheegtey in ninkaas oo cafis Madaxweyne xabsiga kaga soo baxey ama midkamid ah sarakiisha Booliska sii daayey Ciidii Ramadan.
“Madaama uusan cadeyn cidda sii-deysay ‘Maxamad Abuukar’ lakiin wararka laga helayo dad warqab ah ayaa sheegaya inuu xabsiga kaga soo baxey cafis Madaxweyne, ama Booliska sii daayeen 2014.”ayaa warbiixntaan lagu xusey
“March 2014, Ciise Yulux waxaa uu saxaafada u sheegey inuu ka baxey burcad badeednimadii islamarkaana dowlada Puntland cafis siisey”, heshiiskaan ayaa waxaa ka shaqeeyey Cabdulahi Ciid oo ah la taliyaha Madaxweynaha Puntland xaga arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose.
Eedeymahaan loo jeediyey loo jeediyey madaxweynaha Puntland maaha kuwa la xaqiijin karo, mana jiro weli wax war ah oo kazoo baxaay xafiiska C/weli Gaas oo haataan ku maqan dalka UK.